Slitaz RazorQT: Sltaz ၏အရသာအသစ် Qt | Linux မှ
Slitaz RazorQT: Qt နှင့်အတူ Slitaz ၏အရသာအသစ်
ငါတို့ရှိသမျှသည်သိတယ်လို့ထင်ပါတယ် Slitaz, ဒါပေမယ့်ငါပြောနေတာကိုမသိသောသူတို့အဘို့, ကောင်းစွာ Slitaz ဖြန့်ဖြူးခြင်းထက်မကပါ (သို့မဟုတ်အသေးစားဖြန့်ဖြူးခြင်း) ultra light သည်စွမ်းရည်အနည်းငယ်ရှိသောကွန်ပျူတာကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုသည်၊ ၎င်းသည် ISO တစ်ခုသာပိုင်ဆိုင်သည် 30Mb.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဒီ link ကို de ဝီကီပီးဒီးယား
Slitaz အသုံးပြုသည် LXDE ရိုးရှင်း။ မြန်ဆန်သော Desktop Environment ကိုကမ်းလှမ်းရန်နှင့်အသုံးအများဆုံးအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအထောက်အကူပြုမည့် application များထည့်သွင်းရန်။ ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ, IRC ဖောက်သည်…စသည်တို့
သို့သော် developer များအကြားအသစ်သောအရာတစ်ခုရှိနေသည် Slitazဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့မှာဒီအရသာကိုနောက်ထပ်ရရှိနိုင်တယ်၊ RazorQT Desktop Environment အဖြစ်။ ကြည့်ရသည်မှာသူသည်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ စမ်းသပ်နိုင်သည်။
Slitaz RazorQT တွင်ဘာတွေပါဝင်ပါသလဲ။
ငါလျှော့ချသော .iso ၌, အကြောင်းကိုအလေးချိန်သော 39 Mbငါတို့ရှာတွေ့နိုင်တယ် (အခြား application များအကြား) el ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ Arora, တစ်ခက်ရင်းခွ Mozilla Firefox ကို, ဒါပေမယ့်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ Qt, သော ဦး စားပေးများ၏ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ် ဦး မရှိမဖြစ် tool ကိုဖြစ်လာသည် Slitazသို့မဟုတ်၊ သင့်ထိန်းချုပ်မှုစင်တာကိုယခု browser မှစီမံသည်။
Como ဖိုင်မန်နေဂျာ ငါတို့တွေ့ခဲ့တယ် tငါမြင်သောအရာမှတစ် ဦး ခက်ရင်းခွဖြစ်ပါတယ် PCManFMပိုမိုလွယ်ကူသည်၊ သို့သော်တူညီသောလက္ခဏာများနှင့်အတူ:
Current Directory ထဲမှ Terminal ကိုဖွင့်ပါ
ငါပြုခဲ့သောအနည်းငယ်စမ်းသပ်မှုများတွင်၎င်းကို distro ၏ထူးခြားမှု၊ ၎င်း၏ပေါ့ပါးမှုနှင့်အမြန်နှုန်းကိုမှတ်သားနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် bug အနည်းငယ်ရှိသော်လည်းချက်ချင်းမပြင်နိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် VirtualBox, session ကိုစတင်သောအခါ, ငါ့ကို desktop ပေါ်မှာအမှားတစ်ခုပေးတော်မူ၏ RazorQT (ဒါကြောင့်သူတို့နောက်ခံအနက်ရောင်ကိုမြင်ရဒါကြောင့်) ငါ distro ဖြစ်ပျက်မပါဘူး usb မှတ်ဉာဏ်ထဲကနေလျှင်။
တစ်နည်းအားဖြင့်ရိုးရှင်းသောအသေးစိတ်အချက်အလက်။ ဤအရာအားလုံးနှင့်ပတ်သက်ပြီးကောင်းသည်မှာအသုံးချဆော့ဝဲလ်များကိုနှစ်သက်သည် Qtအသုံးပြုရန်မလိုပါ KDE၎င်းတို့တွင် count အပေါ်မှီခိုရန်အလင်းရောင်နောက်တစ်ခုရှိသည်
Slitaz RazorQT ကို download လုပ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Slitaz RazorQT: Qt နှင့်အတူ Slitaz ၏အရသာအသစ်
၎င်းသည် LXDe တွင်သာမကအခြားပတ်ဝန်းကျင်သို့ပြောင်းရန်ကြိုးစားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ … Slitaz နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောလျှင်ယနေ့ GUTL ၏ FTP ရှိဗားရှင်း ၃.၀ ကိုကျွန်ုပ် download လုပ်ခဲ့သည် (ဗားရှင်း ၄.၀ ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ အခုအချိန်မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။ ပြသနာက Flash Memory ထဲကိုထည့်ချင်တဲ့အတွက် iso ကို UnetBootIn ထဲထည့်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်အမှားတစ်ခုဖြစ်ရမယ်။ အခုတော့ Flash ကိုပုလင်းကွဲလို့မရဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Slitaz 3.0 ကိုအလုပ်လုပ်ချင်ခဲ့တယ်
URL code ဘယ်လောက်ဆိုးသလဲဆိုတာငါတောင်းပန်ခဲ့သည်
openSUSE တွင် bootable flash drives ပြုလုပ်ရန်မမှားနိုင်သောကိရိယာတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းကို Imagewriter ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားသော distros များ၏ repositories တွင်ရှိမနေကိုကျွန်ုပ်မသိသော်လည်းမည်သည့် ISO နှင့်မျှမအောင်မြင်ပါ။
အကယ်၍ ၎င်းသည် SUSE Studio ImageWriter ဖြစ်ပါက၎င်းသည် SUSE ဖြန့်ဝေမှုများမှ USB-Live ဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။ Ubuntu ImageWriter ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။
အစွန်အဖျားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ယခုငါ download လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ချန်လှပ်ထားရန်သင်မေးလ်ဖြင့်သင်လိုချင်သော distro လင့်ခ်ကိုပို့ရန်သတိရပါ။ 😛
JC FTP (GUTL / ISO ဖိုင်တွဲ) ထဲကိုထည့်ပြီးပြီ၊ ကားလို့စ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့တယ်၊
ကောင်းသောအရာ (ကားလို့စ်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအမြဲတမ်းအကူအညီတောင်းသည်)၊ ကိစ္စမှာငါတို့မှာအမျိုးသားမှန်ရှိတယ်။
ကောင်းပြီ ... တကယ်တော့သူ့ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခိုင်းတဲ့သူကငါပဲဟားဟားဟား၊
သင်မှန်ပါသည်၊ GUTL ၌သင်တို့၏ပူးပေါင်းပါ ၀ င်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်၏ကျေးဇူးတင်စကားသည်အမြဲတမ်းဖြစ်သည်၊ တခါတရံထိုအပိုင်းကိုကျွန်တော်ချန်လှပ်သည် (errare humanum est) ဖြစ်သည်။ 😉
ဘုရားသခင်ရှိတယ်၊ အတ္တအမြဲ .. အတ္တပဲ ..
အဲဒါမဟုတ်ဘူး ... မင်းကအမြဲတမ်းအဆိုးဆုံးလို့ထင်တယ်¬_¬
စိတ်မပူပါနဲ့ပါပလောဟာ၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြီ။ ၇၅% လောက်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းသော razorQt လှပါတယ်
သငျသညျအရှိဆုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း distro ကိုကြည့် (ပုံများသာအကဲဖြတ်) ငါ့ကိုအများဆုံးရိုက်အများဆုံး 40 MB သာအလေးချိန်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ
ငါသိသလောက်ကတော့ qtfm နဲ့ arora ဟာ forks မဟုတ်ဘူး။ သူကကျွန်တော့်အာရုံကိုဖမ်းမိပေမယ့်သူတို့ arora ပါ ၀ င်တယ်ဆိုတာသူက qupzilla မဟုတ်ဘဲအချိန်အတော်ကြာရပ်တည်နေတယ်ဆိုတာပါ။
ထိုနည်းတူစွာပင်အခြားနေ့တွင်ငါ chakra တွင် kde သို့မဟုတ် gtk စာကြည့်တိုက်များမလိုဘဲ qt ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရန်ကြိုးစားနေသည်။ အမှန်တရားမှာအလွန်ခက်ခဲသည်။ အဆင်မပြေဆုံးကတော့ file browser ဖြစ်သည်။ qtfm ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အတိုင်းပြုလုပ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာ (ဖိုင်အမျိုးမျိုးကို extract လုပ်ရန် atool ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်) ။ သတိပြုသင့်သည်မှာ razor-qt သည် alpha ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မတည်မငြိမ်ဖြစ်သော်လည်းအတော်အတန်မပြည့်စုံပါ၊ ၎င်းတွင် configuration options များစွာရှိသည်။ နောက်တစ်ခုက qt application တော်တော်များများက system ကညွှန်ပြတာမဟုတ်ဘဲ icon တွေမဆိုသုံးတတ်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သိပ်ကိုပေါ့ပါးပေမယ့် Chakra က 115 Mb startup ကိုသုံးတယ်။ အချို့ kde ပရိုဂရမ်တွေ (ဥပမာအားဖြင့် Dolphin) ကိုထည့်လိုက်ရင်သုံးစွဲမှုက ၁၆၀ Mb ထက်မကျော်ပါဘူး။
ကောင်းပြီ၊ သူတို့သည် Forks မဟုတ်သော်လည်းအသွင်အပြင်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအရအလွန်ဆင်တူသည်။ ၎င်းကအထူးသဖြင့် PCManFM ကဲ့သို့တူညီသော qtFM နှင့်စဉ်းစားစေခဲ့သည်။
ကောင်းပြီ, ငါဒီ distro (ငါရံဖန်ရံခါအသုံးပြုသော) အကြောင်းကိုသင်တို့အားငါရေးလိုက်, ထိုသို့အမှန်တကယ်အလင်းဖြစ်၏။ 40MB iso, ဒီထက်နည်းနည်း 50MB လောက်ပဲစတယ်။ ငါဒါကိုနည်းနည်းစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးပြီ။ http://imagebin.org/225464 ၎င်းသည် Openbox + Tint2 + LXterminal ဖြစ်သည်။ Openbox သည် Ambiance LXDE ဖြစ်ပြီး GTK သည် Zukitwo ကိုလိမ္မော်ရောင်အဖြစ်ပြုပြင်သည်
ကောင်းတဲ့မှတ်စု၊ ငါစမ်းကြည့်မယ်လို့ကတိပေးတယ် အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော် RazorQT ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတာသိပ်နည်းတယ်၊ ငါ Gnome ကနေအခုခေတ်အလင်းဉာဏ်အလင်းကအမြဲတမ်းဖြစ်ခဲ့တာ။ QT ကိုသိချင်ရင် KDE ကိုသိချင်ရင်ငါကတခြားအဆိုပြုချက်တွေကြိုးစားနေတယ်၊ ​​ငါ RAzorQT နဲ့ IceWM ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုကြည့်နေတယ်။ ၎င်းသည်ခေါင်းစဉ်နည်းနည်းရှိသော်လည်းဤရွေးချယ်စရာများကိုပြင်ဆင်ရန်လမ်းညွှန်ကိုရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်ကောင်းပေမည်
Slitaz ရဲ့ repositories ကော။ ဘယ်အထုပ်စနစ်ကိုသင်အသုံးပြုပါသလဲ။
ကျွန်ုပ်သည်ဤ distro ကိုစမ်းသပ်ရန် usb (ဘယ်တော့မှဇိမ်ခံကား) တွင်ထားခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ပါ။ သို့သော်ကောင်းမွန်သော package system ရှိပါက၎င်းကို install လုပ်ထိုက်ပါသည်။
ကောင်းပြီ, သူ့ repositories ကသေးငယ်တဲ့, ဒါပေမယ့်သူကအကြောင်းကိုအပေါင်းရှိပါတယ် (ငါနောက်ပိုင်းတွင်ငါပြောပါလိမ့်မယ်) ။ ၎င်း၏ package manager သည် TazPKG ဖြစ်ပြီး၊ .tazpkg တိုးချဲ့ထားသော lzma နှင့်ချုံ့ထားသော packages များကိုအသုံးပြုသည်။ သူတို့ကောင်းစွာ compressed ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကို download လုပ်ရန်နှင့် install လုပ်ရန်အချိန်သိပ်မလိုအပ်ပါ။ (၁၅ မိနစ်ခန့်တွင် Xfce4.8 ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ခဲ့သည်ထင်သည်) ။ TazPKG သည်အခြားမန်နေဂျာများထံမှရွေးချယ်စရာများစွာရှိပြီး၊ တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုပျောက်ဆုံးနေနိုင်သော်လည်း ...
repos နှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းတို့တွင် packets အနည်းငယ်ရှိသည် (Stable repo တစ်ခုလုံးအလေးချိန်သည် ၃ GB ထက်နည်းသည်) သို့သော် TazPKG သည် pack များမှ deb, rpm, pkg.tar.gz (Arch) နှင့် tgz (Slackware) မှ pack များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည် ... ၏ သင်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်မှီခိုရာကိုသင်ပြောင်းရမယ်။
ဒါဟာအတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသံဖြစ်ပြီး၊ ငါရယ်ပြီးသေပြီတဲ့ PIII မှာရည်မှန်းချက်ကသူကောင်းကောင်းပြုမူရဲ့လားဆိုတာကြည့်ဖို့ပါ။
စိတ်ဝင်စားစရာကတော့ QT ကိုသုံးတဲ့ပရိုဂရမ်တွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ KDE Netbook ကတော်တော်ဆိုးတယ်။ RazorQT သည်ရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။
Slitaz ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ အရမ်းပေါ့တယ်၊ အရမ်းကောင်းတယ်၊ ကိုင်တွယ်ပုံနဲ့ဘယ်လောက်လွယ်ကူတယ်ဆိုတာကိုငါကြိုက်တယ်၊ မကြာခင်မှာပဲငါ့ USB ပေါ်မှာစမ်းကြည့်မယ်
Windows မှကျွန်ုပ်၏ USB သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း။
Unetbootin ဖြင့် Windows အတွက်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုရှိသည်
ဒါက RazorQT ရဲ့တိုးတက်မှုကိုတိုးလားတိုးလားဆိုတာကြည့်ရအောင်။ အမှန်တရားကငါစမ်းကြည့်တဲ့အခါငါကြိုက်တယ်ဆိုတာပဲ။
ဗားရှင်း ၄.၀ သည် USB မှရုတ်တရက်ထွက်လာသောအခါကျွန်ုပ်ကိုပြproblemsနာဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် load မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်တရားဝင်ဆိုဒ်မှသုံးကြိမ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ Debian ကနေ USB ကိုကျွန်တော် Unetbootin နဲ့ပထမဆုံးထည့်လိုက်တာက ၃ ကပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အနက်ရောင်မျက်နှာပြင် ၄ ခုဟာအစမှာရှိနေပေမယ့်မစတင်ပါဘူး။ ငါသူတို့ကို USB ထဲကို Tazusb နဲ့ပြတင်းပေါက်ကနေထားလိုက်တယ်၊ ပြီးပြည့်စုံတယ်။ ၃ ပြီးပြည့်စုံတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ၄ လုံးတူညီတယ်။ RazorQT ကိုသွားကြည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်နေတာလဲကြည့်ရအောင် ... နှုတ်ခွန်းဆက်သတယ်။
တူညီတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာ Slitaz4LXDE နဲ့ဒါမှမဟုတ် Slitaz razorQT နဲ့ tazusb ကိုမသုံးပါနဲ့။
TazUSB မပါဘဲ windows မှဖြစ်သကဲ့သို့ငါ linux install လုပ်စရာမလိုပါ။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် virtual pc တွင် UnetBootin ဖြင့်လုပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်သင့်သည် ???
အလယ်အလတ် versionitis ဟုသူကပြောသည်
Universal USB Installer ကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။
အလယ်အလတ် Versionitis တုံ့ပြန်
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်း ... ကျွန်ုပ်သည် USB ဖြင့် Slitaz 4.0 (RazorQt ထက်ပိုမိုနှစ်သက်သော) ရှိမရှိရှိမရှိကိုစောင့်ရန်ကျွန်ုပ်စောင့်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Unetbootin နဲ့မအောင်မြင်နိုင်လို့ပါ။
Slitaz ၄.၀ တွင်ဗွီဒီယိုဖွင့်စက်နှင့်ပုံမှန်မပါ ၀ င်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိရှိထားကြောင်းသင်သိသည်။ သင်၏ repos တွင်၎င်းတို့ရှိသည်ဆိုပါစို့၊ ကျူးဘားရှိကျွန်ုပ်တို့သည် repos ကိုအင်တာနက်မှတိုက်ရိုက် သုံး၍ မရပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ Ariel ပါ၊ 3dfx vodoo 3000 series drier များကိုတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်4mhs pentium 2.3 ရှိသည့် ၂၅၆ သိုးနှင့်ဗွီဒီယို ၁၆ ခုပါသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၌၎င်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုအကြံဥာဏ်ရှိပါသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ emega Sega ကို screen အပြည့်မဖွင့်နိုင်လို့ပါ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် window mode မှာကစားတဲ့အခါ screen ကတုန်ခါနေပါတယ်။
Chakra က i686 ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
မကြာမီလာပါလိမ့်မည်။ Debian repositories တွင်သစ်ကြံပိုးခေါက်ရှိသည်